यातायात शाखा अधिकृत विष्ट भ्रष्टाचारी ठहर : RajdhaniDaily.com - यातायात शाखा अधिकृत विष्ट भ्रष्टाचारी ठहर
Home Uncategorized यातायात शाखा अधिकृत विष्ट भ्रष्टाचारी ठहर
काठमाडौं । विशेष अदालतले परीक्षमा सहभागी नभएका व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमति पत्र दिने यातायात कार्यालय कर्मचारीलाई ‘भ्रष्टाचारी’ ठहर गरेको छ । विशेष अदालतमा न्यायाधीशहरू बालेन्द्र रुपाखेती, शान्तिसिंह थारू र चन्द्रबहादुर सारुको इजलासले यातायात कार्यालयका कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
विशेषले ललितपुर एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयमा कार्यरत तत्कालीन शाखा अधिकृत भक्तबहादुर विष्टलाई दुई लाख जरिवाना र एकवर्ष कैद फैसला गरेको हो । लिखित तथा ट्रायल परीक्षामा फेल भएका तथा परीक्षामा उपस्थित नै नभएकालाई सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
यातायात कार्यालयका आठ कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारले १७ माघ २०७५ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । परीक्षामा फेल भएका एवं ट्रायल परीक्षा नदिएकै अवस्थामा समेत सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गर्ने गरेको सूचना आएपछि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
अख्तियारले शाखा अधिकृत विष्णुप्रसाद सुवेदी, कम्प्युटर अपरेटर जयनारायण चौधरी र सचिनकुमार सिंह, यातायात व्यवस्था सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय ठूलो भ-याङका कम्प्युटर अधिकृत विजेन्द्रराज जोशी, तत्कालीन एकान्तकुनामै कार्यरत तथा हाल कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरका कम्प्युटर अपरेटर अमितकुमार साह, मेची यातायात व्यवस्था कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर विजयराम बनमाला र हाल प्रदेश २ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कम्प्युटर अपरेटर मदनकुमार साह गरी ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो ।
काठमाडौं । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयका संरक्षकको कार्यकाल गोलाप्रथाबाट टुंगो लगाइने भएको छ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था...
Breaking News Sushila Bishwokarma - January 23, 2021 0
Breaking News Sushila Bishwokarma - January 7, 2021 0
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे पक्ष र विपक्षमा आआफ्ना धारणा व्यक्त गरेका छन् । आजको विशेष समयमा सांसद रामनारायण बिडारीले संविधानसभाले...
दिल्लीको वायु प्रदुषणस्तर ‘अत्यन्त कमजोर’
Exclusive Roshan Shrestha - February 9, 2020 0
नयाँ दिल्ली । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको वायु प्रदूषण स्तर ‘अत्यन्त कमजोर’ बन्दै गइरहेको वायु गुणस्तर र मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसन्धान केन्द्रले...
धनकौल । सर्लाहीको धनकौलमा र रामनगरमा फेरी कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरु थपिएका छन् । सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिकामा १९ वर्षिय र ४० वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमणको...
प्रदेश ७ Sushila Bishwokarma - March 1, 2020 0
डोटी । जिल्लाको पूर्वीचौकीमा शनिबार साँझ एक्कासी परेको असिनाले खेतबारीमा लगाइएको गहुँ, जौँ, तोरी तथा तरकारी बालीलगायत अन्य बालीमा ठूलो मात्रामा नोक्सानी पु-याएको छ...
मनोहरा साहित्य समाजको ५३ औं वाचन सम्पन्न
कला Prem Shyangtan - February 22, 2020 0
काठमाडौं । मनोहरा साहित्य समाजले आफ्नो ५३ औ सिर्जना वाचन कार्यक्रम भब्य र सभ्य रुपमा ग्लोबल पब्लिक स्कूलमा, टाउन प्लानिङ, पुरानो...
एमाले संसदीय बोर्डमा को–को परे ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को संसदीय दलको बैठकले २७ सदस्यीय संसदीय बोर्ड गठन गरेको छ । बोर्डमा माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई...
काठमाडौँ उपत्यकामा थपिए ५१२ जना कोरोना संक्रमित
प्रमुख Sushila Bishwokarma - September 14, 2020 0
काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा ५१२ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । काठमाडौंमा ४४०, ललितपुरका २९ र भक्तपुरका ४३ जनामा संक्रमण पुष्टि...
Not-to-be-missed दिल तामाङ - March 30, 2021 0
काठमाडौं । राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कीर्तिमानी र सर्वाधिक सफल कप्तान विराज महर्जनले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्न्यासको घोषणा गरेका छन् । दशरथ रंगशालामा थ्री नेसन्स कपको...
Exclusive Rajdhani Online - February 16, 2020 0
सप्तरी, राजविराज । सप्तरीको बोदेबर्साइन नगरपालिका ५ जाँजरमा मुस्लिम समुदायको ३ दिने धार्मिक सम्मेलन ‘इज्तिमा” शनिबार देखि सुरु भएको छ । तेस्रो मुलुकको...